प्लाष्टिक नाई भन्नु ल ! - Sadrishya
–नारायण अधिकारी Jan 02, 2019
चितवन, १८ पुस : के तपाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ । आजबाट निकुञ्ज प्रवेश गर्दा प्लाष्टिकजन्य वस्तु लिएर जान पाउनुहुने छैन । सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई प्लाष्टिक नाई भन्नु ल ! भनी सिकाइएको छ ।
चितवनको सौराहमा हात्ती चढ्ने ठाउँमा पर्यटकले फालेको प्लास्टिकको झोला चपाउँदै गरको मृग । जथाभावी प्लास्टिकका झोला र पोकाहरु फालिदिदा जङ्गली जनावरहरु खाएपछि बिरामी हुने मात्र नभएर मृत्यु समेत हुने गरेको छ। तस्विर : सदृश्य
निकुञ्ज विशेष गरेर एकसिङ्गे गैँडा र पाटे बाघका लागि प्रख्यात छ । निकुञ्जमा ४३ प्रजातिका स्तनधारी प्राणी, ४५० प्रजातिका चराचुरुङ्गी र ४५ प्रजातिका जलथलचर तथा घस्रने प्राणी पाइन्छन् । यहाँ पाइने प्रमुख स्तनधारी प्राणीमा हरिण, चित्तल, बाँदर तथा लङ्गूर बाँदरलगायत पर्छन् । निकुञ्ज घुम्न आन्तरिक र बाह्य गरी वार्षिक झण्डै दुई लाख पर्यटक आउने गरेका छन् ।(रासस)
Email: in[email protected] [email protected]